အရိယာ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: အရိယာ
Posted on May 17, 2016 by chitnge
ဒေါက်တာချစ်ငယ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း (၁၆) အရိယာတို့၏အရည်အချင်းများ အရိယာတို့၏ အရည်အချင်းများသည် ပင်ကိုအရည်အချင်းများ ဖြစ်သည်။ လုပ်ကြံ သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ရရှိသော အရည်အချင်းများ မဟုတ်ချေ။ ဥပမာ – သန့်စင်သောသီလ သန့်စင်သော သီလဆိုသည်မှာ အရိယာတို့၏ သီလသည် ရာသက်ပန်ဖြစ်သည်။ မသေမချင်း စောင့်စည်းသည်။ စောင့်စည်းသည် ဆိုရာ၌ အရိယာတို့က အကျိုးမဲ့ဖြစ်လို့ မလုပ်ဘူးဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆင်ခြင်စောင့်စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သီလယူထားလို့ သီလမကျိုးပေါက်အောင် ယူတဲ့နေ့အတွက် စောင့်သည်ဆိုသည့်သဘော မဟုတ်ချေ။ ထာဝရသီလဖြစ်သည်။ ယင်းကား Tags: Buddhism, … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, အရိယာ	| Leaveacomment
ဒေါက်တာချစ်ငယ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း (၈) အရိယာစစ်စစ်တို့၏သဘောထားခံယူချက်တစ်ချို့ အရိယာစစ်စစ်တို့၏ သဘောထားတစ်ချို့မှာ – ကိုယ့်တရားကိုယ် နှလုံးသွင်းဖို့ လိုလားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်တရားကို နှလုံးသွင်း နေရလျှင် ကျေနပ်သော သဘောကို ဆောင်သည်။ အထူးသဖြင့် တရားကို ၀င်စားရာ၌ တစ်ပါးသူတို့၏ အထင်ကြီးလိုမှု ခံယူခြင်း လုံးဝမရှိချေ။ တစ်ပါးသူတို့၏ အထင်အမြင်သည် တစ်ပါးသူတို့၏ အထင်အမြင်မျှသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အရိယာစစ်စစ်တို့သည် ကိုယ့်တရားကိုယ် နှလုံးသွင်းရင်း ထိုနှလုံးသွင်းရခြင်း၌ ပျော်ပိုက်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် နေရာရလိုမှုလည်း မရှိကြပေ။ တစ်ချို့က နေရာရလိုမှုအတွက် ကြိုးစားကြသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အရိယာ	| Leaveacomment
Posted on January 10, 2015 by chitnge
ဝိပဿနာဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ(၃၄) ယောဂီများ တရားဝင်စားကြတယ်ဆိုလို့ သာဓုခေါ်မိပါတယ်။ ဘဝတစ်ခုဟာ တစ်နေ့ကြရင်တော့လည်း သေခြင်းတရားကို သဲကမ်းရေဝှေ့တွေ့ရမှာပါပဲ၊ ဒီတော့လည်း ကိုယ်က ဝိပဿနာ ဆင်ခြင်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စာရေးသူကတော့ သစ္စာဝါဒီများအတွက် အတိုချုပ်နည်း ပေးထားပါတယ်။ တရား အားမထုတ်တတ်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်အောင် – အနိစ္စသာ ဆင်ခြင်ပါလို့ သင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆင်ခြင်ပါ။ တစ်ချို့လည်း ဆင်ခြင်လို့ အရှိန်တွေရနေပြီ။ ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ကိုယ်သာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, အရိယာ, မြတ်စွာဘုရား
ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့် ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့် ဆိုတဲ့စကားကို ယောဂီများလည်း သိပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ပညာရဲရင့်မှုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲလယ်ကိုဝင်လေ့ သိပ်မရှိဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့နော်။ ပွဲလယ်ကို ၀င်ရအောင် တချို့က ထိုးသွင်းနေကြတယ်။ ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ မင်္ဂလာဗျူဟာ စာစောင်မှာ စာရေးသူကို ရည်ညွှန်းပြီးတဲ့နောက် ရုပ်နာမ်တောင် မကွဲဘူးလို့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြောင်း အဖြေပေးထားတယ်။ ဒါတော့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာပေါ့နော်။ မိမိကို လာလည်း မလေ့လာဘဲနဲ့ အဝေးကနေမှန်းပြီး ဂုဏ်သိက္ခာကြအောင် ရုပ်နာမ်တောင် မသိဘူးဆိုတော့ မခက်ဘူးလား ယောဂီများ။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ရဟန္တာ, အရိယာ	| Leaveacomment
Posted on November 2, 2013 by chitnge
နိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်၍ နိဗ္ဗာန်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ အချို့ သိပ္ပံပညာရှင်များ၌ ပန်းတိုင်မရှိချေ။ ၎င်းတို့က ဆင်ခြေပေးသည်၊ ပန်းတိုင်ရှိလို့ ပန်းတိုင်ရောက်လျှင် ဆက်လုပ်စရာ မရှိမည်ကို စိုးရိမ်ရသည်ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ယင်းအယူအဆသည် မှားနေပါသည်။ ပန်းတိုင်ရောက်သောအခါ လုံးဝပြီးပြည့်စုံ သွားသည်ကို သူတို့မသိချေ။ သူတို့၏ အမှားတစ်ခုမှာ ပန်းတိုင်ရောက်ခြင်းထက် ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ကြိုးစားခြင်းကို ပို၍တန်ဖိုးထားသည် ဟူသောခံယူချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းခံယူချက်မှာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အရိယာ, လောကုတ္တရာ, … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အရိယာ, လောကုတ္တရာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Posted on May 20, 2013 by chitnge
အရိယာဖြစ်ပြီဆိုလျှင် အရိယာဖြစ်ပြီဆိုလျှင် ဘာထူးခြား ပါသနည်းဆိုသော် – အရိယာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ရရှိခြင်း ထူးခြားသည်သာဖြစ်သည်။ အချို့ကလည်း အရိယာဖြစ်၍ပင်လျှင် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ မျှော်လင့်ချင်ကြသည်။ ဤသို့မျှော်လင့်ရန်မှာ အထင်လွဲမှားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ — ပုထုဇဉ်ဘဝက ကွန်ပြူတာ မတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ထိုပုဂ္ဂိုလ် တရားကျင့်သဖြင့် အရိယာဖြစ်သွားသောအခါ ကွန်ပြူတာ တတ်သွားသည် ဟူ၍ မျှော်လင့်၍ မရချေ။ ရုပ်နာမ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အတတ်ပညာသည်၊ ရုပ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာ ဖြစ်သည်။ အရိယာ … Continue reading →
Posted on March 1, 2013 by chitnge
ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် -07 အခန်း(၃) သစ္စာရှာဖွေကြသူများအတွက် သစ္စာတရားကို မြတ်နိုးမိသည်နှင့်အမျှ သစ္စာရှာဖွေကြသူများကိုလည်း ထက်သန်သောစေတနာ ထားရှိလိုပေသည်။ သစ္စာတရားဟူသည် မြတ်စွာဘုရား၏တရား ဖြစ်လေသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် တရားသိသဖြင့် မြတ်စွာဘုရား ဖြစ်သွားတော်မူရခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မြတ်စွာဘုရား၌ သစ္စာသိရန် ဆရာမလိုပေ။ မိမိကိုယ်တိုင် ပါရမီဖြည့်တော်မူခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ပါရမီပြည့်သောအခါ တရားသိ၍ ဘုရားဖြစ်တော်မူလာခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားသည် လွန်စွာမှ နက်ရှိုင်းလေသည်။ သာမန်မျက်လုံးဖြင့် မမြင်နိုင်ချေ။ အရိယာဉာဏ် မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်မှသာ သိမြင်နိုင်ပေမည်။ သစ္စာရှာဖွေကြသူများသည် အရိယာဉာဏ်မျက်လုံးကို … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, အရိယာ, ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်	| Leaveacomment
အရိယာ ရဟန္တာ နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ဆွေးနွေးခန်းများ(38)
Posted on October 24, 2012 by chitnge
အရိယာ ရဟန္တာ နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ဆွေးနွေးခန်းများ(38) ကိုနန်းအောင်နှင့် ဦးချစ်ငယ် တို့၏ ဆွေးနွေးခန်း ( ၃၇ ) အရိယာ အကြောင်း ငယ် ကိုနန်းအောင် — အရိယာ ကိုမြင်ရုံမျှနဲ့သိလား? ။ နန်း မသိနိုင်ဘူးဗျ။ ငယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ? ။ နန်း သူတို့က ဉာဏ်အရာပိုင်တာလေ — ။ ရုပ်နာမ် အနေအထားကတော့ ဘယ်သိပ်ကွာပါ့မလဲ။ အရိယာ ဖြစ်လို့ အသားဖြူသွားတာမှ မဟုတ်တာ။ ရွှေရောင်ငွေရောင် … Continue reading →
အရိယာ ရဟန္တာ နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ဆွေးနွေးခန်းများ(36)
Posted on October 22, 2012 by chitnge
အရိယာ ရဟန္တာ နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ဆွေးနွေးခန်းများ(36) ကိုနန်းအောင် နှင့် ဦးချစ်ငယ် တို့၏ ဆွေးနွေးခန်း ( ၃၅ ) အကြောင်းချုပ်လျှင် အကျိုးချုပ်ပုံ ငယ် တစ်ခုမေးမယ်ဗျာ ကိုနန်းအောင်။ နန်း မေးပါ။ ငယ် ခင်ဗျားသေသေချာချာ နားထောင်နော်။ နန်း ထောင်ပါ့မယ် ။ ငယ် ရုပ်နာမ်သာရှိတဲ့၊ လူသားက ရုပ်နာမ်မရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ ဆိုတာ— ။ နန်း ရုပ်နာမ်ကို ချုပ်ငြိမ်းစေတဲ့ နည်းနဲ့သွားပေါ့ဗျာ။ ငယ် ရုပ်နာမ်က … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, အရိယာ	| Leaveacomment